I-BKO iqondisa imfundo yokunakekelwa kwezingane emfundweni yesikhathi esithile imfundo yokuvikela izingane nezingane izingane
Ukunakekelwa kwezingane ukunakekelwa
Ufunda ukugqugquzela izingane ngokuzethemba kwabo kanye nentuthuko yabo ngokuhlela imisebenzi kanye nokuqondisa imidlalo. Uzofunda ukuthi ingane ingakwazi nini futhi kanjani ukwakha i-trust trust nezingane nabasebenza nabo. Ufundisa izingane ukuthi zinikeze isakhiwo futhi ziphendule ngokufanele.
Ufunda ukushintsha ingane, ukugeza, ukusika izipikili, kodwa futhi nendlela yokusingatha ukusindisa impilo. Uzolungisa ukudla kwezingane kanye nezingane bese uhamba nokudla.
Uyakujabulela ukusebenza nezingane
Umphathi wokuqeqesha ekunakekeleni izingane uthatha isilinganiso iminyaka emibili.
Imfundo ehambisanayo, okusho ukuthi ungangena nganoma yisiphi isikhathi sonyaka kodwa ungaphumelela kuphela ngo-30 Juni.
Unesiqinisekiso Umsizi Wokusiza etholakale emfundweni yesikhathi esithile noma ugcwalise ngempumelelo okungenani okukodwa kwe-4e Secondary Nutritional & Care in imfundo yesikhathi esigcwele.
Uma usuqedile inkambo emfundweni yabantu abadala noma uqedile ukunakekelwa kwesibili kwe-6e, inkambo encishisiwe kungenzeka. Ngenxa yalokhu, kumele ube yi-18 ekuqaleni noma ngonyaka we-18 kulowo nyaka wesikole.
Uzobe unesibopho sokunakekelwa nokuphathwa kwezingane nsuku zonke. Ubanikeza isakhiwo bese uqala ukubonisana nabazali.
Ungaya esikhungweni sokunakekelwa kwezinsuku, ukunakekelwa kwezingane ezingekho esikoleni noma enkulisa. Ungase uqale ukusebenza njengomqashi womholo. Ngesitifiketi sokuphathwa kwebhizinisi ungase futhi uqale ukunakekela izingane ngezingane eziphezulu ze-18.
Yini uMqondisi ekunakekelweni kwezingane okufanelekele?
Ungaqhubeka ufunda uma uphumelela emfundweni yesibili. Uhlelo lwe "Childhood Pedagogy" lunikeza ithuba lokuba umhlinzeki wezokunakekela izingane ezingaphezu kwezingane ze-18. Ungaphinda ufunde imfundo yothisha yezinkulisa.